Pcb Assembly Kuongorora - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pcb Assembly Kuongorora
Nezvose zviri zviviri kuburikidza neburi (THT) uye pamusoro peMount (SMT) musangano kugona, ese akatungamirwa uye RoHS inoenderana iripo, yedu PCBA sevhisi yebasa kubva kumumvuri kuenda pakuenda kugadzira yakaoma, yakawanda-tekinoroji PCB magungano mune akaderera kusvika epakati mavhoriyamu.
Isu tinopa izere uye isina kukwana kutendeuka-kiyi masevhisi. Yakazara Turn-Kiyi inovhara pcb yekunyepedzera uye gungano, kusanganisira kugadzira kwePCBs, zvikamu zvekutsvaga anf yekupedzisira gungano Nezve Partial Turn-Kiyi, mutengi anogona kupa yakasarudzika runyorwa rwezvikamu. Tichaodha zvikamu zvasara uye toita gungano zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Kazhinji, tinopa pcb Assembly musangano:
✓SMT (Surface-Mount Technology), THT (DIP Technology) uye SMT & THT yakavhenganiswa.
✓RoHS uye Isiri RoHS kugadzira.
✓Prototype, yakaderera kusvika yepakati vhoriyamu kugadzirwa (1-5000 PCS).
✓Turnkey / Consignment Supply Chain Mhinduro.
✓Diki chikamu saizi 0201, BGA, uBGA, QFN, POP uye Leadless machipisi.
✓Mhinduro dzekuyedza: X-ray, AOI, ICT, Vision kuongorora uye Bvunzo bvunzo.
Yedu yevatengi base inosanganisira indasitiri vatungamiriri muRF, Medical, Industrial, Smart Home, Internet yezvinhu uye zvemagetsi zvemagetsi. Isu takatsaurirwa kupa hukuru Hunhu, Dhirivhari uye Vatengi Sevhisi pamakwikwi mutengo.